Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.6.4 မသေချာမရေရာ၏မျက်နှာ၌ဆုံးဖြတ်ချက်များဖော်ဆောင်ရေး
ငါသုတေသီများရုန်းကန်ဖို့မျှော်လင့်ထားသည့်နေရာတွင်စတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးဧရိယာမသေချာမရေရာ၏မျက်နှာကိုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချသည်။ ဒါကသုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ပြုပါရန်နှင့်အဘယ်သို့ပြုဖို့မဘယ်သို့သောအကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချပါဝငျသညျ, အပေါငျးတို့သဒဿနပညာရှင်နှင့်မှန်သောချိန်ခွင်သည်နောက်, ဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲအဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေမကြာခဏမပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးလုပ်ရဦးမည်။ Encore ဒီဇိုင်းအခါ, ဥပမာ, သုတေသီများကတစ်စုံတစ်ဦးကိုရဲကသွားရောက်ကြည့်ရှုစေလိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်ခြေကိုသိရန်ဆန္ဒရှိပေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတျ, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်သုတေသီများကဒီဇိုင်းသောအခါအချို့သင်တန်းသားများအတွက်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုသိရန်ဆန္ဒရှိပေလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်နိုင်အလွန်အမင်းနိမ့်သော်လည်း, သုတေသနရာအရပ်ကိုကြာခင်မှာသူတို့မသိသောဖြစ်ကြသည်။ မဟုတ်စီမံကိန်းကိုလူသိရှင်ကြားဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ခြေရာခံသောကြောင့်, ဤဖြစ်နိုင်ခြေယေဘုယျအားဖြင့်ထိုစီမံကိန်းများပြီးစီးခဲ့ကြသည်ပင်ပြီးနောက်လူသိများကြသည်မဟုတ်။
မသေချာမရေရာဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လူမှုရေးသုတေသနထူးခြားသောမဟုတ်ပါဘူး။ အန္တရာယ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များစနစ်တကျအကဲဖြတ်ဖော်ပြလာသောအခါအဆိုပါ Belmont အစီရင်ခံစာ, ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာသည်ဤအတိအကျတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဤရွေ့ကားမသေချာမရေရာမှုများ, သို့သော်, ကျနော်တို့လျော့နည်းအတွေ့အကြုံရှိသည်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်, အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်အဒီဂျစ်တယ်ခေတ်လူမှုရေးသုတေသန၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၏, ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်ပိုမိုပြင်းထန်ဖြစ်ကြသည်။
ဤသူမသေချာမရေရာအပ်ပေးတော်မူအချို့သောလူများကကြိုတင်ကာကွယ်မှုနိယာမတစ်ခုအသိအမှတ်ပြုထားသည့်ဗားရှင်းဖြစ်သည့် "တောင်းပန်ပါတယ်ထက်ပိုကောင်းအန္တရာယ်ကင်း" နဲ့တူတစ်ခုခုထောက်ခံပုံရသည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုကျိုးကြောင်းဆီလျော်-ဖြစ်ကောင်းပင်ပုံပေါ်နေချိန်တွင်ကျွန်တော်သည်ပညာရှိ-ကြောင့်အမှန်တကယ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်, ဒါကြောင့်သုတေသနသွေးအေးသည် ဖြစ်. , ထိုသို့လူမှားလမ်းအတွက်ထင်ဖြစ်ပေါ်စေသည် (Sunstein 2005) ။ ထိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုနိယာမတွေနဲ့ပြဿနာတွေနားလည်နိုင်ရန်အတွက်, ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. 700,000 လူပါဝင်စီစဉ်ထားလျက်, စမ်းသပ်မှုရှိလူများထိခိုက်မှုခံစားမယ်လို့အချို့သောအခွင့်အလမ်းဆက်ဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ထိုစမ်းသပ်မှု Facebook အသုံးပြုသူများဖို့နဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှအကျိုးရှိသောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သိကျွမ်းခြင်းပညာလိုက်လျောနိုင်ကြောင်းအချို့သောအခွင့်အလမ်းလည်းရှိ၏။ ထိုစမ်းသပ်မှုတန်ဖိုးရှိသောအသိပညာထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်, (ရှိရှိကွှေးကျွောဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်အဖြစ်) ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ခွင့်ပြုစဉ်အခါ, စမ်းသပ်မှုကာကွယ်ပေးနိုင်ကိုလည်းစွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၏သင်တန်း, ရှေးခယျြမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားအဖြစ်စမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာနဲ့စမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာမဟုတ်အကြားမျှမက, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာသို့ဆောင်ခဲ့ပြီစေခြင်းငှါဒီဇိုင်းဖို့အများကြီးဖြစ်နိုင်သမျှပြုပြင်မွမ်းမံရှိပါတယ်။ သို့သော်တစ်ချိန်ချိန်, သုတေသီများလေ့လာမှုတစ်ခုအကျင့်ကိုကျင့်နှင့်တစ်ဦးလေ့လာမှုလုပ်နေတာမဟုတ်အကြားရွေးချယ်မှုရှိသည်လိမ့်မယ်, နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အရေးမယူနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အန္တရာယ်များရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကသာလုပ်ဆောင်ချက်၏အန္တရာယ်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့မသင့်လျော်သည်။ အတော်လေးရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူမျှမစွန့်လွတ်ချဉ်းကပ်မှုလည်းရှိ၏။
ထိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုနိယာမထက်ကျော်လွန် Moving, မသေချာမရေရာအပ်ပေးတော်မူဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချစဉ်းစားရန်တဦးတည်းအရေးကြီးသောနည်းလမ်းအနည်းငယ်မျှသာအန္တရာယ်စံဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံစံနှုန်းဖို့အနည်းငယ်မျှသာအန္တရာယ်စံကြိုးစားမှုထိုကဲ့သို့သောအားကစားကစားကားများမောင်းနှင်အဖြစ်တက်ရောက်လာသူများကို၎င်းတို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွင်ဆောင်ရွက်ရန်သောအန္တရာယ်များ, ဆန့်ကျင်နေတဲ့အထူးသဖြင့်လေ့လာထားသည့်စွန့်စားမှု (Wendler et al. 2005) ။ အရာတစ်ခုခုကိုအနည်းငယ်မျှသာအန္တရာယ်ရှိမရှိအကဲဖြတ်အန္တရာယ်များ၏အမှန်တကယ်အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသောကွောငျ့ဒီချဉ်းကပ်မှုကအဖိုးတန်သည်။ သုတေသနစတင်မီကဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်၌, သုတေသီသဘာဝကျကျသတင်းသင်တန်းသားများကိုစမ်းသပ်မှုအတွက်မြင်ရမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ Feeds ဖြစ်ပေါ်နေအပေါ်စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းအရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင် (Meyer 2015) ။ ကုသမှုအောက်မှာ News Feeds သဘာဝကျကျ Facebook ပေါ်မှာပေါ်ပေါက်သောသူတို့ကိုဆင်တူဖြစ်လျှင်, ထိုသုတေသီများစမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်မျှသာအန္တရာယ်ကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်။ ထိုအခါသူတို့ကစွန့်စားမှုရဲ့အကြွင်းမဲ့အာဏာအဆင့်ကိုမသိရပါဘူးရင်တောင်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်။ အလားတူချဉ်းကပ်မှု Encore မှလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ Encore ထိုကဲ့သို့သောဖိနှိပ်အစိုးရများနှင့်အတူနိုင်ငံပေါင်းပိတ်ပင်ထားသောနိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေဝက်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်အထိခိုက်မခံဖြစ်လူသိများခဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတောင်းဆိုမှုများဖြစ်ပေါ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်အချို့သောနိုင်ငံများရှိသင်တန်းသားများကိုများအတွက်အနည်းငယ်မျှသာအန္တရာယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော် Encore-သောသာ Twitter ကို Facebook က, ရန်တောင်းဆိုမှုများဖြစ်ပေါ်အဲဒီဆိုဒ်များရန်တောင်းဆိုမှုများကိုသာမန် web browsing အတွက်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့်အနည်းငယ်မျှသာတောင်းဆိုမှု YouTube ကို-ဖြစ်ပါသည်၏, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဗားရှင်း (Narayanan and Zevenbergen 2015) ။
အမည်မသိအန္တရာယ်နှင့်အတူလေ့လာမှုများနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချတဲ့အခါတစ်ဦးကဒုတိယအရေးကြီးသော idea ကသုတေသီတွေကသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားတွက်ချက်ရန်ခွင့်ပြုတော်မူသော, ပါဝါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည် (Cohen 1988) ။ သင့်ရဲ့လေ့လာမှုအန္တာရာယ်-ပင်မှသင်တန်းသားများကိုဖော်ထုတ်စေခြင်းငှါ, လျှင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့၏အနည်းဆုံးအန္တရာယ်-ထို့နောက်နိယာမသင်သည်သင်၏သုတေသနလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်အန္တရာယ်၏အသေးငယ်ဆုံးပမာဏကိုစည်းကြပ်ချင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ (ပြန်ငါအခန်း 4. တှငျဆှေးနှေးကြောင်းနိယာမကိုလျှော့ချဖို့စဉ်းစားပါ) အချို့သောသုတေသီများကတတ်နိုင်သမျှကြီးတွေ, သုတေသနကျင့်ဝတ်အဖြစ်၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများအောင်နှင့်အတူတစ်ဦးစွဲများသော်လည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေအဖြစ်သေးငယ်ပါစေသင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သင်သည်သင်၏လေ့လာမှုကပါဝငျအန္တရာယ်၏အတိအကျ level ကိုမသိရပါဘူးရင်တောင်ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင်ကတတ်နိုင်သမျှသေးငယ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ Power ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင်တန်းအသစ်မဟုတ်ပေမယ်ကြောင့် Analog စအသက်အရွယ်နှင့်မည်သို့ကြောင့်ယနေ့အသုံးပြုသင့်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည့်လမ်းအကြားအရေးပါသောကွာခြားချက်လည်းရှိ၏။ အ Analog စအသက်အရွယ်ခုနှစ်, သုတေသီများယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ရဲ့လေ့လာမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, အောက်မှာ-powered) သေးငယ်လွန်းမကြီးကြောင်းသေချာစေရန်အာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုပြု၏။ သို့သျောယခုသုတေသနပညာရှင်များကသူတို့၏လေ့လာမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, Over-powered) လည်းကြီးမားသောမဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်အာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုပါသင့်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုပါနှင့်သင့်လေ့လာမှုကလူတစ်ဦးကြီးမားသောအရေအတွက်လိုအပ်ပုံလျှင်, သင်တို့ကိုလေ့လာနေကြတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသေးသေးလေးသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် အကယ်. , သင်သည်ဤသေးငယ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်အရေးကြီးသောအမည်မသိအရွယ်အစား၏အန္တရာယ်များမှလူများတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်စည်းကြပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိမေးမြန်းသင့်ပါသည်။ မြားစှာသောအခြေအနေများတွင်အဖြေဖြစ်ကောင်းမျှသည် (Prentice and Miller 1992) ။
အဆိုပါအနည်းဆုံးအန္တရာယ်စံနှင့်အာဏာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့်အကြောင်းအကြောင်းပြချက်နှင့်ဒီဇိုင်းလေ့လာမှုများကိုကူညီ, ဒါပေမဲ့သူတို့သင်သင်တန်းသားများကိုသင့်ရဲ့လေ့လာမှုနှင့်အဘယ်သို့သူတို့သည်သင်၏လေ့လာမှုမှာပါဝင်မှတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ, အန္တရာယ်များအကြောင်းကိုခံစားရစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုမဆိုသတင်းအချက်အလက်သစ်များမပေးပါဘူး။ မသေချာမရေရာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းကျင့်ဝတ်-တုန့်ပြန်စစ်တမ်းများမှဦးဆောင်နှင့်စမ်းသပ်မှုတွေဆန္ဒပြနေသောအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်, စုဆောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
(Q1) "သင်တို့ကိုဂရုစိုက်သူတစ်ဦးဦးကဒီစမ်းသပ်မှုများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပါဝင်သူဖြစ်လျှင်သင်သည်ထိုလူတစ်ဦးတစ်ဦးပါဝင်သူအဖြစ်ထည့်သွင်းခံရဖို့လို?": [ဟုတ်တယ်], [ငါမကွိုကျရှိ], [မရှိပါ]
(Q2) "သုတေသီဒီစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်းကိုသင်ယုံကြည်သလား": [ဟုတ်တယ်], [ဟုတ်တယ်, ဒါပေမယ့်သတိနဲ့], [ငါမသေချာဘူး], [မရှိပါ]
အသီးအသီးမေးခွန်းအပြီးတွင်ဖြေဆိုသူသူတို့အဖြေကိုရှင်းပြနိုင်သည့်အတွက်အာကာသထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြေဆိုသူ-သူအခြို့ကအခြေခံလူဦးရေဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို -answer တစ် Micro-task ကိုလုပ်အားစျေးကွက်ကနေစုဆောင်းအလားအလာသင်တန်းသားများသို့မဟုတ်လူ (ဥပမာ, အမေဇုံစက်မှု Turk) ဖြစ်နိုင်ပါတယ် (Schechter and Bravo-Lillo 2014) ။
ကျင့်ဝတ်-တုန့်ပြန်စစ်တမ်းများငါအထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေနှစ်ခု features တွေရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးသူတို့လေ့လာမှုတစ်ခုကောက်ယူခဲ့မီကဖြစ်ပျက်, ထို့ကြောင့် (ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများအတွက်စောင့်ကြည့်ကြောင်းချဉ်းကပ်မှုဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) သုတေသနစတင်မီကပြဿနာတွေကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာကျင့်ဝတ်-တုန့်ပြန်စစ်တမ်းများတူညီစီမံကိနျး၏ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်း၏ရိပ်မိကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်သုတေသနစီမံကိန်းကို multiple ဗားရှင်းရှိုးမှသုတေသီများကို enable ။ တစ်ခုမှာန့်အသတ်, သို့သော်, ကျင့်ဝတ်-တုန့်ပြန်စစ်တမ်းများကစစ်တမ်းရလဒ်များအားပေးကွဲပြားခြားနားသောသုတေသနလုပ်ငန်းဒီဇိုင်းများအကြားဆုံးဖြတ်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ အစွန်းရောက်မသေချာမရေရာ၏ဖြစ်ရပ်များတွင်သတင်းအချက်အလက်ဒီလိုမျိုးသုတေသီများ '' ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလမ်းပြကူညီပေးနိုငျ; တကယ်တော့, Schechter and Bravo-Lillo (2014) တစ်ဦးကျင့်ဝတ်-တုန့်ပြန်စစ်တမ်းအတွက်သင်တန်းသားများအားဖြင့်ကြီးပြင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှတုန့်ပြန်မှာစီစဉ်ထားလေ့လာမှုစွန့်ခွာအစီရင်ခံစာ။
ကျင့်ဝတ်-တုန့်ပြန်စစ်တမ်းများအဆိုပြုထားသုတေသနတုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်ဘို့အထောကျအကူဖွစျနိုငျသနေစဉ်, သူတို့ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသို့မဟုတ်ပြင်းထန်မှုများကိုတိုင်းတာမဟုတ်နိုင်ပါ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်များက High-အန္တရာယ် setting တွင်မရေရာမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတစ်ခုမှာလမ်း, အခြို့လူမှုရေးသုတေသနတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်အံ့သောငှါတခုချဉ်းကပ်ခဲ့ကြသည်စမ်းသပ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်တစ်ခုကိုမူးယစ်၏ထိရောက်မှုကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါ, သုတေသီများချက်ချင်းကြီးတစ်ခုကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမှခုန်ကြပါဘူး။ ယင်းအစားသူတို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုများနှစ်မျိုးကို run ပါ။ ကနဦးအဆင့်ငါရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်, သုတေသီများလုံခြုံဆေးထိုးရှာဖွေတာအပေါ်အထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒီလေ့လာမှုတွေကလူငယ်တစ်အရေအတွက်ပါဝငျသညျ။ လုံခြုံဆေးထိုးရှာဖွေတွေ့ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, အဆင့် II ကိုစမ်းသပ်မှုတွေမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်ရန်, တကအကောင်းဆုံးအမှုအခွအေနမှာအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရဲ့ (Singal, Higgins, and Waljee 2014) ။ သာအဆင့်ငါနှင့် II ကိုလေ့လာမှုများပြီးနောက်ကြီးမားသောကျပန်းထိန်းချုပ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်အကဲဖြတ်ခံရဖို့ခွင့်ပြုအသစ်တစ်ခုကိုမူးယစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်မူးယစ်ဆေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်စမ်းသပ်မှုတွေ၏အတိအကျကိုဖွဲ့စည်းပုံလူမှုရေးသုတေသနအတွက်ကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်မဖြစ်စေခြင်းငှါနေစဉ်မသေချာမရေရာနှငျ့ရငျဆိုငျရသောအခါ, သုတေသီများအတိအလင်းလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဒီဇိုင်းသေးငယ်တဲ့လေ့လာမှုတွေကို run နိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်, Encore နှင့်အတူသင်တို့သည်အားကြီးသောအုပ်ချုပ်-of-ဥပဒေနှင့်အနိုင်ငံများရှိသင်တန်းသားများနှင့်အတူစတင်သုတေသီစိတ်ကူးနိုင်။
အတူတူဤလေးပါးချဉ်းကပ်-The အနည်းငယ်မျှသာအန္တရာယ်စံ, ပါဝါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ကျင့်ဝတ်-တုန့်ပြန်စစ်တမ်းများနှင့်ဆန္ဒပြနေသင်ပင်မသေချာမရေရာ၏မျက်နှာ၌, တစ်ဦးကိုပညာရှိလမ်းအတွက်ရှေ့ဆက်ကူညီစမ်းသပ်မှုတွေ-နိုင်ပါတယ်။ မသေချာမရေရာအရေးမယူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမလိုပေ။